Lambarka CAS 12059-14-2
Cufnaanta 7. 39g / cm3
Barta dhalaalida 1020. C
Isticmaala qalabka elektarooniga ah ee isku dhafan, filim nikeliye ah 'nickel silikoon', silikoon silikoon siliconthermocouple
Silicon (NiSi) waa austenitic (NiSi) alloy (1); waxaa loo adeegsadaa inay tahay sheyga taban ee thermocouple n-nooca. Xasiloonida heerkulka korantada ayaa ka wanaagsan tan E, J iyo nooca lammaanaha korontada ku shaqeeya.
Daawada nikkel niikilku waa in aan la dhigin gaaska ay ku jirto baaruudda. Dhawaan, waxay ku taxan tahay nooc ka mid ah heerkulbeegga heer caalami ah.
Xuduudaha NiSi waa sida soo socota:
Halabuurka kiimikada: Si: 4.3%, Mg: 0.1%, inta soo hartay waa Ni
Cufnaanta: 8.585g / cm3
Cadaadis: 0.365 Ω mm2 / M Isugeyn heerkulka celceliska (20-100 ° C) 689x10 laga jaray awoodda 6aad / KHufnaanta balaarinta kuleylka (20-100 ° C) 17x10 laga jaray awoodda 6aad / K barta ugu horreysa ee dhalaalka: 1420 ° C
Silicon waa qalabka semiconductor-ka ee aadka loo isticmaalo. Noocyo kala duwan oo silsilado ah ayaa loo darsay xiriirka iyo isku xirnaanta tiknoolajiyada aaladaha semiconductor. MoSi2, WSI iyo
Ni2Si waxaa loo soo saaray horumarinta aaladaha microelectronic. Filimadan khafiifka ah ee silsiladda ku saleysan waxay leeyihiin isku dheelitirnaan wanaagsan oo ka sameysan qalabka silsiladda, waxaana loo isticmaali karaa dahaadhka, go'doominta, isku dhejinta iyo isku xirnaanta aaladaha silikooniga ah, NiSi, maadaama ay tahay walxaha isdifaaca is-waafajinta ugu ballanqaadka badan ee aaladaha nanoscale, ayaa si ballaaran loogu darsay luminta cilladaha yar yar iyo miisaaniyadda kuleylka sameynta oo hooseysa, iska caabin yar iyo wax saameyn ah oo khadka tooska ah ku yeelan karo koronto maaddada 'graphene electrode', 'nickel silicide' waxay dib u dhigi kartaa dhacdooyinka pulverization iyo dildilaaca silsiladda elektaroonigga ah, waxayna hagaajineysaa waxqabadka korantada. SiC ceramics-ka heerkulka iyo jawiga kala duwan ayaa la baaray.
Hore: Titanium Disilicide, TiSi2
Xiga: Cobalt Silicide, CoSi2
NiSi2 budada silicil Nickel
Warshadaha budada silicilka NiSi2 Nickel
NiSi2 Nickel budada silicide Factory
NiSi2 Nickel budada silider soo saaraha
Soosaarayaasha budada silica NiSi2 Nickel
NiSi2 Nickel budada silicide Qiimaha
NiSi2 Nickel budada silicide Quotes